Umaka: amathuluzi wokumaketha »Ikhasi 2 kwangu-2» Martech Zone
Umaka: amathuluzi wokumaketha
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Kanye ngonyaka ngiphula ibhola elidala le-crystal bese ngihlanganyela izibikezelo ezimbalwa zokumaketha ngamathrendi engicabanga ukuthi azobaluleka kumabhizinisi amancane. Ngonyaka odlule ngabikezela kahle ukwenyuka kwezikhangiso zenhlalo, indima eyandisiwe yokuqukethwe njengethuluzi le-SEO nokuthi umklamo ophendulayo weselula wawungeke usaba ngokuzithandela. Ungafunda zonke izibikezelo zami zokumaketha zango-2015 ubone ukuthi ngangiseduze kangakanani. Ngemuva kwalokho funda ku
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Lokhu kuyi-infographic enhle evela eqenjini lePardot ezinhlanganweni lapho ukuthengisa nokumaketha kunzima khona ukuzivumelanisa. Njengomxhumanisi wokumaketha, sinenkinga nezinhlangano eziqhutshwa ukuthengisa. Enye inkinga esemqoka ukuthi izinhlangano eziqhutshwa ukuthengisa zivame ukusebenzisa okulindelwe okufanayo abanazo eqenjini labo lokuthengisa eqenjini lokumaketha. Siqashwa izinhlangano eziqhutshwa ukuthengisa ngoba ziyabona ukuthi umkhiqizo wazo awuzange wakhe ukuqwashisa, igunya nokwethembela online nokuthi ukuthengisa kwazo